वीरमा १ सय २८ स्लाइस नयाँ सिटी स्क्यान जडान, निजी अस्पतालमा भन्दा तीनगुणा कम शुल्कमा सेवा – Health Post Nepal
२०७५ पुष २० गते ९:०८
सबैभन्दा ठूलो र पुरानो सरकारी अस्पतालमा वीरमा १ सय २८ स्लाइस अत्याधुनिक सिटी स्क्यान मेसिन जडान गरिएको छ । खरिद सम्झौता भएको झन्डै ८ वर्षपछि जडान भएको मेसिन बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।
बढी स्लाइस सिटी स्क्यानबाट निदान गर्दा छिटो हुने भएकोले ‘रेडिएसन एक्पोजर कम’ हुने भएकोले सिटी गर्दा हुने असर पनि कम हुन्छ । अर्कोतिर यसले स्पष्ट आकृति र तुलनात्मक रुपमा धेरै संख्यामा सेवा दिन सकने अस्पतालका निर्देशक डा. भुपेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
वि.सं. २०६८ मा अस्पतालले उक्त सिटी स्क्यान मेसिन खदिरका लागि नेदरल्यान्डको फिनिक्स कम्पनीसित खरिद सम्झौता गरेको थियो । आर्थिक कारण तथा खरिद सम्झौता विवाद अदालतसम्म पुगेका कारण सम्झौताको झन्डै ८ वर्षसम्म मेसिन रोकिएको थियो ।
खरिद प्रक्रिया सुरु भएसँगै पदाधिकारी विवादलगायतको कारण खदिर प्रक्रिया रोकिएपछि कम्पनी अदालत गएको थियो । अदालतले किन्नु भन्ने आदेश दिएसँगै तीन महिनाअघि कम्पनीले मेसिन डेलिभरी दिएको थियो ।
विभागीय प्रमुख डा. शर्माका अनुसार मतिष्कघातलगायत मतिष्कभित्रका अन्य चोट, नसामा रगत जमेको, घाँटीको समस्या, क्यान्सर, हड्डीको समस्या, पेटको समस्यालगायत सबै प्रकारका जटिल रोगको निदानमा मेसिन उपयोगी हुन्छ ।यसअघि अस्पतालमा १६ स्लाइसको मेसिन उपलब्ध भए पनि ट्युब बिग्रिएका कारण सेवा अवरुद्ध रहेको अवस्थामा अत्याधुनिक नयाँ सिटी जडान भएको हो l
रेडियोलोजी विभागका प्रमुख डा. सरोज शर्माका अनुसार नयाँ सिटी स्क्यान बिरामीको नसा ‘एन्जिओग्राम’का लागिसमेत उपयोगी र प्रभावकारी हुन्छ । हालसम्म वीरमा भएका सिटी स्क्यानको तुलनामा यो निकै अत्याधुनिक पनि हो ।
सम्झौता हुँदा ६४ स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिन ल्याउनेगरी सम्झौता भए पनि हाल अस्पतालको विशेष आग्रहमा हाल १ सय २८ स्लाइसको मेसिन ल्याइएको हो । अस्पतालले उक्त मेसिन भित्र्याउन ८ करोड ८४ लाख खर्च गरेको जनाएको छ । फिलिक्स कम्पनीको उक्त मेसिनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू ३ महिनाअघि नै अस्पताललाई उपलब्ध गराइसकेको भएपनि सिटी राक्ने स्थान खोजी र अन्य प्रक्रिया लम्बिदाँ समय लागेको थियो ।
अस्पतालका अनुसार सेवाग्राहीले नयाँ मेसिनमार्फत एकपटक सिटी स्क्यान गराएबापत २ हजारदेखि ४ हजारसम्म शुल्क तिनुपर्नेछ । सिटी स्क्यान गराउने अंगअनुसार शुल्कसमेत फरक हुन्छ । यस सेवाबापतको शुल्क निजी अस्तपालमा भन्दा वीरमा तीनगुणासम्म कम पर्ने डा. शर्मा बताउँछन् । नवजडित मेसिनबाट प्रतिदिन ४० देखि ४५ जनासम्म बिरामीलाई सेवा दिन सकिनेछ । नयाँ मेसिनबाट बिरामीलाई छिटो र सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ ।
दाँतको उपचार गर्दा कोरोना संक्रमण जोखिमबाट जोगिन ‘रबर ड्याम’ प्रयोग